सापटी भनेर साथीबाट लिइएको ११ हजार रिंगेट लिएर यादव मलेसियामा फरार ! - jagritikhabar.com
सापटी भनेर साथीबाट लिइएको ११ हजार रिंगेट लिएर यादव मलेसियामा फरार !
मलेसियाको एक कम्पनीमा काम गर्दै आएका एकजना नेपाली श्रमिकले आफ्नै साथीहरुबाट पैसा ठगी गरि फरार भएका,सम्पर्क बिहिन भएका छ्न।
बिगत ६ बर्षदेखी मलेसियाको पेटालिङ्गजाया सेलाङ्गरमा अवस्थित सिग्नेचर म्यानुफ्याक्चरिङ एसडिएन बिएचडी ( SIGNATURE MANUFACTURING SDN . BHD . Lot 24 , Jalan Teknologi . Taman Sains Selangor , 47810 Petaling Jaya , Selangor ) नामक कम्पनीमा काम गर्दै आएका नेपाल ठेगाना धनुषा जिल्ला निवासी कविन्द्र यादवले मलेसिया रिंगेट आरएम ११,००० / नेपाली रु .३ लाख ८ हजार पैसा लिएर फरार भएका हुन्।
कविन्द्रले सापटी भनेर लगेको पैसा लिएर फरार भएपछि पैसा दिनेवाला पीडित बनेका छन्। पीडितले कविन्द्रलाई खोजी गरि आवश्यक कारवाही गरिपाँउ भनेर मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतावासमा निवेदन पेश गरेका छ्न।
उक्त निवेदनमा लेखिएको छ , उक्त कम्पनीमा म लगायत अन्य ३ जना व्यक्ति पनि सोही कम्पनीमा कार्यरत थियो । धेरै वर्ष देखि सगै काम गरेकोले हामीहरुमा एक अर्का प्रति विश्वासको वातावरण हुँदै गयो । विभिन्न समयमा हामीहरु पालैपालो गरेर पैसा सापटी लिने/दिने गर्दथ्यो ।
गत महिना निज कविन्द्र यादवले श्रीमति बिरामी भएको बहाना बनाएर म लगायत अन्य साथीहरु सापटी भनेर आर.एम. ११,००० / – लिएको थियो । निज कविन्द्र यादव २ दिन देखि सम्पर्क विहिन भएको हुँदा निजको खोजतलास गरी दोषीलाई कारवाही गरी पाउँ भनी श्रीमान् समक्ष यो निवेदन पेश गर्दछु ।
निवेदक : कमल कुमार पुरी सिम्पानी -८ , दिहिगाउँ खोटाङ्ग फोन नम्बर : +६०११-२१३०७३८७
मलेसियाले भन्यो-विदेशी सुरक्षा गार्डमा नेपालीको विकल्प छैन !
मलेसियाको गृह मन्त्रालयले विदेशी सुरक्षा (सेक्युरेटी) गार्डका रुपमा नेपाली कामदारमात्रै राख्न सकिने स्पष्ट गरेको छ ।
मलेसियाका लागि पाकिस्तानबाट १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार जना सुरक्षा गार्ड ल्याउने तयारीबारे खबरहरु आइरहँदा त्यहाँको गृह मन्त्रालयले त्यसको खण्डन गरेको हो ।
मन्त्रालयले स्थानीय व्यक्तिलाई नै सुरक्षा गार्डमा रुपमा राख्न सकिने भन्दै बरु स्थानीय सेक्युरेटी कम्पनीलाई त्यसका लागि प्रोत्साहित गरिने बताएको छ ।
समाचार अनुसार १ लाख २० हजार ७६७ स्थानीय व्यक्तिले सुरक्षा गार्डको तालिम पनि लिएका छन् । यसको उद्देश्य सरकारले सेक्युरेटी गार्डबारे बनाएको मापदण्ड पुरा गर्नु हो । मलेसियन सरकारले विदेशबाट सुरक्षा गार्ड ल्याउने नीति अस्थायी भएको बताउँदै आएको छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपालमा पाकिस्तानबाट सुरक्षा गार्ड लैजाने समाचार आएपछि नेपाली कामदारको रोजगारको बजार खोसिने चिन्ता प्रकट भइरहेको थियो ।
मलेसियाका लागि पाकिस्तानी राजदूत अम्ना बलोचले पाकिस्तानी पत्रिका द नेशनसँग नेपालसँग मलेसियाले गरेको सुरक्षागार्डको सम्झौता बदलिएकाले त्यसको फाइदा पाकिस्तानले उठाउने बताएकी थिइन् । अब पाकिस्तानले चाहेजस्तो नहुने देखिएको छ ।
नेपालबाट पूर्वसेना वा पूर्वप्रहरीसहित आधारभूत तालिम लिएकाहरु पनि मलेसियामा सेक्युरेटी गार्डका रुपमा जाने गरेका छन् ।
मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई निकै सकारात्मक रुपमा हेरिन्छ । मलेसियामा इमान्दार र बहादुर भनेर चिनिएका नेपालीको सट्टामा अरुलाई ल्याउने विषय मलेसियाका लागि असजिलो रहेको बुधबारको गृह मन्त्रालयको स्पष्टीकरणले पनि देखाएको छ ।